Iiraan oo iska fogeysan eedeymaha Mareykanka oo ku aadan weerarada Diyaaradaha Droneska ee suadiga lagu qaadey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iiraan oo iska fogeysan eedeymaha Mareykanka oo ku aadan weerarada ...
Iiraan oo iska fogeysan eedeymaha Mareykanka oo ku aadan weerarada Diyaaradaha Droneska ee suadiga lagu qaadey
Iran ayaa iska fogeysay eedeyntii Mareykanka ee ahayd in Tehran ay ka dambeysay weerarada diyaaradaha aan la wadin ee gubtay labo xarumood oo waaweyn oo saliid ah oo ku yaal Saudi Aramco, iyada oo Sacuudiga ay ku guuleysatay in ay soo celiso howlihii xarumaha burbursan.
Jabhadda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii Sabtidii ka dhacay Abqaiq – warshaddii ugu weyneed ee saliidda adduunka – iyo garoonka saliida ee Khurais. Shaqo joojinta iyo shidaalka saliida ee laga soo dhoofiyo suadia ayaa hoos u dhici doona adduunka.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu eedeeyey Iran, isagoo yiri “hadda waxay billaabeen weerar aan caadi aheyn oo ku saabsan sahayda tamarta adduunka”.
Pompeo ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay “Majirto wax cadeyn ah oo ah in weeraradu ka yimaadeen Yemen,” ayuu Pompeo ku yiri Twitter, isaga oo tixraacaya sheegashada masuuliyada Xuutiyiinta. Ma uusan keenin wax caddeyn ah oo taageeraya sheegashadiisa.
Iyadoo ay ka jawaabaya, wasaarada arimaha dibada ee Iran axadii ayaa eedeynta Mareykanku u jeediyey ku tilmaamtey “wax aan micno lahayn” waxayna sheegtay in loogu talagay in ay qiil ka bixiyaan falalka ka dhanka ah Iran.
“Hadalada noocan oo kale ah … waxay u egyihiin shirqool sirdoon iyo ururo qarsoon si loo waxyeeleeyo sumcadda wadanka loona abuuro qaab loogu tala galey talaabooyinka mustaqbalka” ayuu yiri afayeenka Abbas Mousavi.
‘Cadaadis aad u sareeya’
Xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa kor u kacday illaa bishii May ee sanadkii hore, markii Washington ay kaligeed ka baxday heshiiskii caalamiga ahaa ee 2015 ee u ballanqaaday Tehran in laga qaado unaqabateynta si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka.
Tan iyo markii laga noqday, Mareykanka wuxuu xayiraada saaray cunaqabateynta saaran Iran taas oo qeyb ka ah ololaha “cadaadiska ugu badan”.
Wasiirka Arimaha Dibadda Iran Mohammad Javad Zarif ayaa ku qoray Twitter-ka maanta.
“Mareykanka iyo macaamiisheeda ayaa ku xayiran Yemen sababta oo ah mala awaal in hub ka sarreeya uu u horseedi doono guul militari,” ayuu raaciyay, isaga oo ku baaqaya wadahadalada in lagu soo afjaro dagaalka ka socda wadanka ugu saboolsan dunida carabta.
Iyada oo taageero laga helayo Maraykanka, Sacuudi Carabiya ayaa hogaaminayey ilaa iyo bishii Maarso 2015 isbahaysi militari oo la dagaallamaya Xuutiyiinta oo taageeraya dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen.
Dagaalku wuxuu diley tobanaan kun oo qof, wuxuu malaayiin ku meeleeyay qarka u saran macaluul wuxuuna u horseeday qalalaasaha bani’aadamnimo ee dunida ugu ba’an.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleeceeyay isbaheysiga uu hogaamiyo sacuudiga ee beegsanaya dadka rayidka ah isbitaalada, iskuulada iyo suuqyada, halka ay sidoo kale dhaleeceeyeen wadamada reer galbeedka in ay hub siinayeen. Bishii Abriil, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu diidey qaraar laba geesood ah oo ku qasbi lahaa millatariga Mareykanka inuu joojiyo taageerada uu siiyo ciidamada isbahaysiga.
Previous articleFaah faahin:dil ka dhacay Muqdisho
Next articleWafdi ka socda WHO oo Muqdisho soo gaaray & soo dhaweeyn loo sameeyay
Madaxweyne Xaaf ka hadley Guddiga dhismaha maamul Goboleedka Galmudug
Degdeg faafaahinta qarax ka dhacey galkacyo